ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက် (၂)
Posted by weiwei on Apr 28, 2014 in Photography, Travel | 18 comments
မြေပုံထဲက လမ်းကြောင်းအတိုင်း သွားပါမယ်
ဒီနေ့လဲ တစ်နေကုန် ကားစီးပါအုန်းမယ် .. မြေပုံထဲမှာ ဆွဲထားတဲ့ ပန်းရောင်လမ်းအတိုင်းပဲ … စုစုပေါင်း မိုင် ၁၂၀ ၀န်ကျင်လောက် တောင်တန်းတွေပေါ် ကားစီးကြမယ် … လိုရမယ်ရ ရွတ်စရာ ဘုရားစာတွေ သယ်လာခဲ့နော် ..
မနက် ၇ နာရီ ကုန်ဟိန်းမြို့ကနေ စထွက်မယ်လို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် တကယ်တမ်းထွက်ဖြစ်တော့ ၇ နာရီခွဲ ရှိပါပြီ။ ဟိုလူ့စောင့် ဒီလူ့စောင့်နဲ့ ပေါက်လို့ ပါလို့ မပြီးကြတဲ့သူတွေကို စိတ်မရှည်အောင်စောင့်ရအုန်းမယ် ..
ကုန်ဟိန်းက စထွက်တာနဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ စမ်းချောင်းတွေနဲ့ စိမ်းစိမ်းစိုစိုရှိပါတယ်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ရေအားလျှပ်စစ် အသုံးပြုကြတာ တွေ့ရတယ်။ မိုင်တိုင်ကို သံလွင်မြစ်ကနေ စပြီး ခေါ်ဝေါ်တဲ့ဓလေ့တစ်ခု တွေ့ခဲ့ရတယ်။ တာလီကို ဖြတ်ပြီးနောက် တာကော် (၂) မိုင်ဆိုတဲ့ မြို့မှာ ခဏနားကြတယ်။ စမ်းချောင်းတစ်ခု စီးဆင်းနေတာတွေ့ရတယ်။ အဲဒီစမ်းချောင်းက မိုင် (၃၀) အထိ တောင်ကြားတွေထဲမှာ ဆက်တိုက်စီးဆင်းနေတယ်တဲ့။ ကြည်လင်နေတဲ့ စမ်းချောင်းရေ၊ စမ်းချောင်းသံတွေကြောင့် တောတောင်ထဲမှာ သွားနေရသလို ခံစားရပါတယ်။
ဒီစမ်းချောင်းလေးက မိုင် ၃၀ တောင်ရှည်တယ်တဲ့
သံလွင်မြစ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးတာနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းတောင်တန်းတွေက ပိုမြင့်ပြီး ပိုလှတယ်။ ရာသီဥတုလဲ ပိုအေးမြပါတယ်။ မိုင် ၃၀ ပန်ခင်းဆိုတဲ့ မြို့မှာ ခဏနားကြတယ်။ အပြန်အဲဒီမှာ တည်းရမှာတဲ့။ ကုန်ဟိန်းလောက် မတိုးတက် မလှပတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာပါပဲ ..
မိုင် ၃၀ ပန်ခင်းက တည်းခိုခန်း
လမ်းခရီးရဲ့ တစ်ဝက်ဖြစ်တဲ့ မိုင်းပျဉ်းမြို့မှာ နေ့လည်စာစားကြမှာပါ။ သွားတာက ကားကြီး ၂ စီးဆိုတော့ တစ်စီးနဲ့တစ်စီး စောင့်မောင်းရင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် မကြာခဏရပ်ရင်းနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ မောင်းလာကြတယ်။ အိပ်ငိုက်လိုက်၊ နိုးလိုက်၊ လှတယ်ထင်ရင် ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့ ငေးရင်း တွေးရင်း ကားစီးလာခဲ့တယ်။
ကားကြီးပဲ ဘရိတ်ခဏခဏဆွဲရလို့ heat တက်ပါတယ်။ တစ်နာရီလောက်မောင်းပြီးတိုင်း တစ်ခါနားပြီး ဘီးတွေကို ရေနဲ့လောင်းကြရတယ်။ တောင်ကျရေတွေက ကြည်စိမ်းနေတာပဲု။
ကားဘီးရေလောင်းဖို့ ရေကန်တွေ ရွာတိုင်းလိုလိုမှာ ရှိတယ်
မိုင်းပျဉ်းရောက်တော့ ၁၂ နာရီခွဲလောက်ရှိပြီ။ ထမင်းဆိုင်ကို ကြိုမှာထားလို့ အဆင်သင့်ပြင်ထားပြီးသားတွေ့ရတယ်။ နေရာအတော်လေးကျယ်တဲ့ တရုတ်ထမင်းဆိုင်တစ်ခုပဲ (ဆိုင်နံမည်မှတ်ဖို့ မေ့ခဲ့တယ်)၊ စေတနာပါပါနဲ့ သေသေချာချာချက်ပြုတ်ထားလို့ စားရတာ အဆင်ပြေတယ်။
မိုင်းပျဉ်းကထွက်ပြီးနောက် တောင်တန်းတွေက ပိုပိုလှလာတယ်။ မမြင်ဖူးတဲ့ မြင်ကွင်းတွေမို့ သေချာလိုက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့။ တောင်တွေကိုကြည့်ရင်း မူးလာတယ်။ မြန်မာပြည်ထဲ နှံ့နေပြီ တစ်ခါမှ ကားမမူးခဲ့ပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ တကယ်မူးလာတယ်။ ကားဆရာက သိပ်မြင့်တဲ့တောင်တွေတက်ရတဲ့အခါ အဲယားကွန်းခဏပိတ်ပြီး ပြူတင်းပေါက်ဖွင့်ခိုင်းလို့ တော်သေးတယ်။ တောင်လေက လတ်ဆတ်နေတယ်။ ဖုန်လုံးဝမပါတဲ့ အေးမြတဲ့လေတွေက ရန်ကုန်သူားတွေအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လေတွေဖြစ်မှာပါ။
တောမီးလား ဘာလားတော့မသိဘူး ..
တောင်တွေတစ်တောင်ပြီးတစ်တောင်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်၊ တောင်နံမည်တွေရှိပေမယ့် နံမည်တွေက မှတ်ရခက်တယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ကိုးကွေ့တောင်ကို သတိထားခဲ့မိတယ်။ တောင်ထိပ်ရောက်ဖို့ ကိုးကွေ့တက်ပြီးမှ ရောက်ပြီး ကိုးကွေ့ပြန်ဆင်းရတဲ့တောင်တစ်ခု၊ စပါယ်ရှယ်တောင်လို့ခေါ်တဲ့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၃၀၀၀ ကျော်အထိအမြင့်ရှိတဲ့တောင်တစ်ခု၊ ညနေနေကျချိန် အလင်းရောင်မှုန်မှုန်မှာ ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ တောင်အလှတွေကို ခံစားခဲ့ရတာ အန်ချင်လောက်အောင် မူးပါတယ်။
ဒီလို မြင်ကွင်းမျိုး မြင်ရခဲတယ်
လှတာတွေမြင်ရတော့ အိပ်ငိုက်ဖို့တောင် သတိမရတော့ဘူး ..
ဒီလိုအကွေ့တွေမှာ သတိထားပြီး မောင်းနေရတယ်
ကျိုင်းတုံမြိုိ့ကို ညနေပိုင်းလောက် ရောက်သင့်ပေမယ့် နေသာဝင်သွားရော မရောက်သေးပါဘူး။ တောင်တက်လမ်းတွေများလွန်းလို့ ခရီးတော်တော်လေးဖင့်ပါတယ်။ ကားဆရာကိုလဲ မပြောရဲဘူးလေ။ ကားဆရာက နမ့်စန်နယ်သားဖြစ်ပြီး တောင်ပေါ်လမ်းတွေကျွမ်းကျင်တယ်လို့ သိရလို့ စိတ်ချလက်ချ လိုက်ခဲ့ရပေမယ့် နှေးလိုက်တာလို့ ခံစားရတယ်။ အမှောင်ထဲ လမ်းတစ်နေရာမှာ တောင်ကျချောင်းတစ်ခု လမ်းမပေါ်ဖြတ်စီးနေတာရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကားဆရာက ကျွမ်းကျင်လို့ ကျော်လိုက်နိုင်ပေမယ့် အနောက်ကကားက နစ်သွားလို့ အဲဒီမှာ တစ်နာရီနီးပါး ကြာသွားသေးတယ်။
ည ၈ နာရီမှ ကျိုင်းတုံမြို့ထဲရောက်ပါတယ်။ မြို့ထဲက အောင်နိုင် မြန်မာထမင်းဆိုင်မှာ ကြိုတင်စီစဉ်ထားပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ မရတော့ပါဘူး။ မူးပြီးအန်ချင်နေလို့ ထမင်းမစားတော့ပဲ လစ်ပိုတစ်လုံးသောက်၊ ရေသောက်ပြီး ညနေစာပြီးလိုက်တယ်။
ထမင်းစားပြီး အားလုံး ကားပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့မှ ကျိုင်းတုံဟော်တယ်သစ်မှာ ညအိပ်ရပ်နားပါတော့မယ်။
အားလုံးပဲ ပင်ပန်းနေကြပြီဆိုတော့ ရေပူနဲ့ ရေချိုးပြီး အိပ်ကြရအောင်နော် …
နောက်နေ့မှ ကျိုင်းတုံ- တာချီလိတ်နဲ့ မယ်ဆိုင်ဘက် ခရီးဆက်ကြမယ် ..
တောင်ပုံတွေ ရွေးရတော်တော်ခက်ပါတယ် .. အများကြီးရိုက်ခဲ့ပြီး အားလုံးလှနေလို့ ..
အကုန်တင်လို့မရလို့ တတ်နိုင်သလောက် စိတ်ရှည်ရှည်ရွေးပြီး တင်ထားပါတယ် ..
ရှုခင်းတွေတော့ရင် သပ် ရှုမောဖွယ်ပါပဲ
`”တာင် ပေါ်လမ်းကားလေးနဲ့ လှမ်းကာလေ ဒီလိုနဲ့ 
ရှမ်းပြည်နယ်က အစားအစာ ရာသီဥတု အားလုံးကောင်းတယ်နော် သဘာဝအလှတွေလည်း
မျက်စိတဆုံးပဲ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရိုးရာဒ လေ့တွေ
လည်းလေ့လာလို့ ရတယ် ပျော်စရာကောင်းတယ်
မဝေ ရေ လှ တဲ့ ပုံ အ တော် များများ ရ လာ သည် ဘဲ
အား ကျ လိုက် တာ
လှလိုက်တာ မဝေရေ။ တကယ့်ကိုပုံကောင်းကောင်းလေးတွေပဲကိုး။ တလမ်းလုံး တောက်လျှောက်နှိပ်လာပုံ ရတယ်။ အားကျလိုက်တာ။
ဝေ့ ဓာတ်ပုံတို့ လေးပေါက် ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ရတာ ရိုးသားတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
ရာသီရဲ့ အရောင်တွေကို ဓာတ်ပုံထဲမှာ အရှိအတိုင်း မြင်ရတယ်လေ။
ဒီ အထိလိုက်လာခဲ့ပါတယ် ဝေရေ။
မွဝေ ပုံတွေမြင်တော့ ရှမ်းပြည် သဒိရပြီး အရမ်းသွားချင်လာဘီ….
အဲဒီက တည်းခိုခန်းတွေကလည်း မဝေတို့လို တခါတလေသမားလောက်ပဲလာတာရှိမယ် ထင်တယ်နော်… မိုင်တစ်ရာကျော်ကို အဲလောက်မောင်းရတာဆိုတော့… ကားနဲ့သွားဖို့မစဉ်းစားရဲတော့ဘူး… :)) ညီမတို့သွားတော့ လေယာဉ်နဲ့…အဲဒါကပင်ပန်းတာ.. စောရိုးချစ်သူတို့လိုင်းနဲ့… ကျိုင်းတုံရောက်ဖို့… ကြားထဲ ၅မြို့လောက်လူတင်ချလုပ်တော့ လူလည်းမျော့သွားတယ်… မိုင်းလားနဲ့တာချီလိတ်ကိုသာ ကားနဲ့သွားတာ… စိတ်ထင် ၄..၅နာရီစီလောက်ပဲကြာမယ်ထင်တယ်.. မမှတ်မိတော့ဘူး… မပင်ပန်းဘူး… ခရီးသွားရင် လမ်းမှာအိပ်…. ဓာတ်ပုံမရိုက်တတ်တဲ့အကျင့်က ဒီရွာထဲရောက်မှနောင်တရတယ်… သူများတွေလှလှပပ လေးတွေရိုက်ထားကြလိုက်တာ.. ကိုယ့်မှာဆို တစ်ပုံမှမရှိဘူး.. :))
မဝေ လမ်းပုံတွေ ကြည့်တော့ မဆိုးပါဘူး ။ လမ်းတော့ ကျဉ်းတယ် ။ မန္တလေး – ရွာငံ လမ်း လိုဘဲဖြစ်ပုံရတယ် ။ တောင်တက်ဆင်း ကြမ်းတယ် ။ လမ်းကျဉ်းတယ် ။
အရင်သိထားတာက ဗွက်ပေါက်ပြီး ကားကြီးတွေ တောင်နစ်တယ် ဆိုပြီး မသွားရဲတာ။ တောင်ကြီးမှာ တွေ့မိတဲ့ တာချီလိတ်ဘက် က လာတဲ့ဆိုတဲ့ကားတွေမှာလည်း ကြည့်လိုက်ရင် ရွံ့ အလိမ်းလိမ်းမို့ စိတ်ကူးထဲ က ဖယ်ထားတာ ။ ဒီပုံ အတိုင်းဆိုသွားလို့တော့ရပြီ ။။
ကုန်းဟိန်းမှာ အိပ်မယ်ဆို ကြို တော့ချိတ်ထားမှ ရမယ်ထင်တယ် နော် ..
ကျေးကျေးပါ မဝေ ။
နွေရာသီမို့လို့ထင်တယ် လမ်းက ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းပါတယ်။ ကျိုင်းတုံရောက်ခါနီး နာရီဝက်အလိုလောက်တစ်နေရာမှာပဲ ဗွက်နစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ကားသေးဆိုရင် လွတ်ပါတယ်။
ကုန်ဟိန်းမှာတည်းဖို့ ကြိုချိတ်ထားဖို့ မလိုလောက်ပါဘူး။ ရွှေတောင်တန်းတည်းခိုခန်းတစ်ခုထဲတောင် အခွဲ ၃ ခု ရှိတယ်။
လှေကားထစ် စိုက်ခင်းလေး တွေနဲ့ ရှုခင်းလှလှလေးတွေ တွေ့ရလို့
ပျော်ရွှင်ရမှာပါနော်…တောင်အထပ်ထပ် ပုံလေးတွေလဲ လှလိုက်တာ..
ဓာတ်ပုံဆို ဘာမှမပြင်တဲ့ အမြင်တိုင်းပုံလေးတွေဘဲချစ်တယ်…
မြင်ကွင်းက မြေပြန်နဲ့ တခြားစီပဲ….. စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့မို့ အဲဒါနဲ့တင်ကို အတော်လေး လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်မှာပါ။
ဟိုပုံလေးက အရောင်filter လုပ်ထားသလားတောင် ထင်ရတယ် တော်တော်လှတယ်ဗျ
ရန်ကုန်ကနေသာ စရေတွက်ရင် ၃ ရက် ကားစီးပြီးတာတောင်မှ အခုထိ တာချီလိတ်မရောက်သေးဘူးနော် ..
ရန်ကုန်-တာချီလိတ်ကို လေယာဉ်နဲ့သွားလိုက်ရင် ခဏလေးနဲ့ရောက်နိုင်ပေမယ့် ရှမ်းတောင်တန်းတွေကြားထဲမှာ ကားနဲ့သွားရတဲ့ အရသာက တစ်မျိုးကောင်းပါတယ်..
ဓါတ်ပုံတွေက အရှိအတိုင်း ကားပေါ်က ရိုက်ခဲ့တာတွေများပါတယ်။ ဘာဆော့ဝဲလ်နဲ့မှ မပြင်ထားဘူး။ သဘာဝစစ်စစ် ..
နောက်ထပ်တစ်ရက် ကားထပ်စီးပြီးရင် အထူးအဆန်းလေးတွေ တွေ့ရတော့မှာ ..
ခရီးသွားလေ့သွားထရှိတဲ့ ဝေေ၀တောင် မူးတယ်ဆိုတော့။
တောင်ပေါ်က လတ်ဆတ်တဲ့ လေကလေးတော့ ရှုချင်သား။
ဒီပို့စ်မှာတော့ ဓါတ်ပုံတွေ အတော်လှတယ်ဗျ။
အပြင်မှာ ဓါတ်ပုံထဲကထက် ပိုလှတယ် …
ကွန်မန့်တွေက အနီရောင်တွေကလဲ တစ်မျိုးလှတယ်နော် …
တောင်ပေါ်လမ်း ရှုခင်းပုံတွေထိတော့ လိုက်ခံစားပါပြီ